Azụmaahịa nke Nnyocha Okwu | Martech Zone
a is a Kwadoro Post. Site na uru ọnụọgụ ọchụchọ dị elu, ọ bụghị ihe ijuanya na ngwaọrụ nyocha na-apụta ebe niile na weebụ. M ahu nagide OkwuTracker na blọgụ m, naanị n'ihi na ọ nwere ngwa mgbakwunye dị mfe iji chọta akara kacha mma maka ederede gị ọ bụla.
Amaara m na SEOmoz nwere ezigbo okwu ole na ole na ngwa okwu mkpirisi n'ime akuko nke ọdịnaya di elu, enweghi m ike igosi na mmefu na $ 49 kwa ọnwa na obere blog.
Okwu rịọrọ ka m mee nkwado blog na ha ma nwee mkpali ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ a. Wordze nwere ngwugwu ndenye aha $ 45 kwa ọnwa ọ na-egosi na ịnwe mkpokọta akụrụngwa kachasị ike m hụtụrụla gbasara nchọpụta isiokwu:
Nke a bụ ndepụta nke njirimara na ngwaọrụ ị ga - ahụ na Wordze:
Isiokwu Research Ngwá Ọrụ - nke a bụ ihe engine ebe ị nwere ike tinye okwu na nkebi ahịrịokwu na ọ na-abịa azụ na a akụkọ ihe mere eme, indexing, ogo, ịgụ, na ndị ọzọ nchịkọta ngwaọrụ jikọtara ahịrịokwu na ndị ọzọ dị ka ahịrịokwu.
Bubata Keywords - ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na azụmaahịa ahụ, ị ​​nwere ike mezuo nyocha na isiokwu na n'oge gara aga. Wordze emeela ka ọ dịrị gị mfe ịbubata isiokwu gị ndị ọzọ na sistemụ ha.
Nsonaazụ Download - nkọwa nke onwe.
isiokwu API - nke a bụ ihe siri ike siri ike API iji tinye Wordze n'ime usoro njikwa ọdịnaya ma ọ bụ ngwa gị. Ihe a masịrị m nke ukwuu - Ọ ga-amasị m ịhụ mmadụ ka ọ na-etinye ihe nchịkọta akụkọ nke na-etinye ntụnye isiokwu ka ị na-ede.
Nkọwahie Okwu - Nke a bụ atụmatụ eleghara anya. Ọ bụrụ na m kpado saịtị m na 'blog blog technology'na'ịre ahịa tecnology blog'ma ọ bụ naanị marketig na teknụzụ karịa, enwere m ike ijide ụfọdụ nnukwu okporo ụzọ nke saịtị ndị ọzọ nwere ike ileghara anya!
Historical Keyword Research - a na-adọrọ mmasị anya na ọnọdụ nke Keywords na nkebi ahịrịokwu.
Nnyocha Nchọgharị Nchọgharị - nnukwu ngwá ọrụ maka igwu ala n'ime nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ na ịchọta ihe saịtị ndị ọzọ kachasị mma.
Projects - ma ọ bụrụ na ị na-eme nnyocha na otutu oru ngo, ngwa-enye gị ohere iji hazie gị Keywords n'ime oru maka ngwa ngwa ohere ọ bụla nke ngwaọrụ.
Weebụsaịtị Lelee - ezigbo ngwa ọrụ ebe ị nwere ike itinye URL maka ibe ma nweta mkpesa na isi okwu na ahịrịokwu niile, yana ike igwu miri emi na nke ọ bụla maka nyocha ọzọ.
Thesaurus - Wordze nwekwara thesaurus siri ike ebe ị nwere ike ịgbakwunye isiokwu ma weghachite mkpụrụokwu ndị ọzọ iji jiri ya, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite ọdịnaya kachasị iji chụọ Ọchụchọ.
Nyochaa WordRank - chọpụta onye nwere isiokwu ndị ị na-achọ ịnyagharị.
Nbudata - ikike iji mepụta nyocha gị niile.
Ajụjụ - Ajuju Ajuju - nke a bu ihe kwesiri ya na ọla edo, ngalaba a na-aza ajuju obula i nwere na Keyword Research.
Vidio - anaghị amasị ịgụ? Ndị folks a ebipụtala vidiyo na ngwaọrụ ha niile na otu esi eme ha n'ụzọ zuru ezu!
Ma n'ezie, Wordze na-enye mmemme mgbakwunye!
M umeala n'obi uche, ndị kasị mma atụmatụ Okwu bụ nhazi nke ngwa ọrụ na ịdị mfe n'ịchọta na iji ha. Ọ dịghị mma dịka ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ, mana ọ chọghị ịbụ - nke a bụ nyocha okwu maka ịdị mma!
Kedu ihe Wordze nwere ike iji? Ngwaọrụ niile mara ezigbo mma - pịa, bipụta, pịa, bipụta. Ọ ga-amasi m ịhụ ike idozi grid ma mepụta eserese ma depụta ndepụta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m nwere isiokwu isiokwu malitere na Machị 15th, aga m achọ ime nyocha tupu mbido Machị 15 na post-March 15 na nyocha m niile na charting.
Tags: ndị webmasters googlemavenlinkegwunjikwa ọrụnsonaazụ mgbasa ozi mmekọrịtanjikwa ọrụime-en-ndepụtaNwosuwunderlist
Feb 6, 2008 n’elekere 11:53 nke abali
Anọ m na-eji Wordze maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ ihe dị ka ọnwa isii ugbu a. Achọpụtara m na ọ bara uru ma jiri obi m niile kwenye na ntụnye gị.
Feb 6, 2008 na 1:45 PM
Gịnị mere na ị gaghị ekwe ka m banye na ihe nzuzo ndị a, Julie? 🙂
Feb 7, 2008 na 9:21 PM
Ezigbo ozi na post a. M na-amá »about ihe banyere isiokwu nsuso na SEO. Na-eche ebe m ga-ahụ ngwa mgbakwunye a maka Wordtracker, oleekwa ka ọ dị? Daalụ.
Feb 7, 2008 na 9:29 PM
Hey, ị nwekwara ike iji KeywordSpy na isiokwu gị nyocha.